Dawlada Chaina oo baadhitaan Ku haysa Mdaxi hayda Interpol | Biyoguurenews.com
Home Wararka Dawlada Chaina oo baadhitaan Ku haysa Mdaxi hayda Interpol
Dawlada Chaina oo baadhitaan Ku haysa Mdaxi hayda Interpol
Dawlada Chaina oo Baadhitaan ku haysa Madaxii Masuuliyiinta Shiinaha ayaa sheegay in Meng Hongwei, oo ah madaxa hay’adda booliiska caalamiga ah ee Interpol oo la waayey ku dhawaad labo toddobaad kahor, in lagu baarayo gudaha dalka Shiinaha tuhun la xiriira meel ka dhac dhanka sharciga ah.
Mr Meng ayaa lasoo xidhiidhay qoyskiisa 25-kii bishii hore ee September kadib markii uu ka amba baxay magaalada dalka Faransiiska kutaal ee Lyon oo xarun u ah Interpol. Xaskiisa Grace Meng ayaa bulshada caalamka ka codsatay in ay gacan ka siiyaan sidii ay saygeeda u heli lahayd.
Saraakiisha Shiinaha ayaa xaqiijiyay wax dad badan ay aaminsanaayeen, taas oo ah in Meng Hongwei xabsiga loo taxaabay markii diyaaradii sidday ay caga-dhigatay dalkaasi, waxaana ku socda baaritaan ku saabsan xeerarka uu jebiyay oo aan la shaacin.
Wararka sheegaya in la qabtay ayaa waxaa baahiyay guddiga qaran ee la dagaalanka musuq maasuqa ee xukuumadda Beijing, kaasoo tilmaamay in Meng lagu qabtay howlgal ballaraan oo musuq maasuqa ka dhan ah oo uu amray madaxweyne Xi Jinping, kaasoo horseeday in toddobaadyo ama bilo dhowr ah la waayo masuuliyiin sar sare.
Dhanka kale, xarunta Interpol ee ku taal magaalada Lyon ayaa shaacisay in Meng uu iska casilay xilkii uu u hayay hay’adaasi, dhawaanna la dooran doono ciddii bedeli lahayd. Balse Interpol ma aanay sheegin qaabka uu isu casilay.
Isla magaalada Lyon, xaaska Meng ee Grace shir jaraa’id oo ay qabatay waxay sheegtay in farriintii ugu dambeysay ee u teleefoonkeeda gacanta uu ugu soo diray ay ahayd sawirka toorri, taasoo u xaqiijisay in uu xaalad khatar ah ku jiro.
Waxay saxaafada la hadashay iyadoo dhabarka aaddisay kaamerooyinka si aan loo aqoonsan, waxayna iyadoo illinta ceshanaysa warbixinta ku akhrisay luuqadaha Ingriiska iyo Shiinaha.
Waxaa hadda cadaatay halka uu ku dambeeyay Meng balse waxaa aan wali faahfaahin laga haynin dacwadaha loo haysato iyo waxa uu wajihi doono.
Previous articleMadaxweynihii Hore ee Killilka Shanaad Oo Mar Kale Maxakamada La Hor keenay
Next articleBerbera Dawlada hoose ee Berbera oo Iskuul Cusub u Dhistay xaafada magaalo cad ee berbera1